Muxuu Lionel Messi kaga dhignaa Final-kii xalay ee Copa del Rey?… (Ka bogo rikoorka uu jabiyey & Tirada Koobabka uu ku guuleystay) – Gool FM
Haaruun April 18, 2021
(Seville) 18 Abriil 2021. Kulankii xalay oo Sabti ahaa ee Final-ka Copa del Rey ayaa mid gaar ah u ahaa Lionel Messi.
Kaliya ma’ahan inuu ku guuleystay Koobkiisii 35-aad isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan Koxoda Barcelona, laakiin sidoo kale waxa uu jabiyey rikoorka tartankan.
Xiddiga reer Argentine ayaa dhaliyey labadii gool ee ugu dambeeyey oo ay heshay kooxda Barcelona kulankii ay 4-0 ku dardareen naadiga Athletic Club.
Markii uu sidaas samaynayay, wuxuu noqday Messi gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda final-ka Copa del Rey, isagoo ka sare maray Telmo Zarra oo ugu sarreeya gooldhalinta kama dambeysta tartankan kuna haystay sagaal gool.
Messi ayaa 10 gool ka dhaliyey final-ka tartankan, waana xiddiga ugu badan taariikhda, waxaana uu koobkan ku guuleystay todobo jeer.
Labadii gool ee uu xalay Messi ku dhaliyey Magaalada Seville ayaa sidoo kale ka dhigtay inuu saxiixay 31-gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan iyadoo dhowr kulan ay ka harsan yihiin in la ciyaaro horyaalka La Liga.
Xilli ciyaareedkan oo uu ku guuleystay Copa del Rey waa koobkiisii 35-aad ee uu la qaado Barcelona, waana Koobkiisii ugu horreeyay ee uu hanto muddo labo sanadood ah.
RASMI: Xiddig muhiim ah oo ka tirsan kooxda Real Madrid oo seegi doona kulanka caawa ee Getafe kaddib markii...